XAFLADA TAAGEERO JAALIYADDA SOOMAALIYEED EE MALAYSIA
Waxaa 1dii bishan Oktober ka dhacay magaalada Kaula Lumpur xafalad ay soo qaban qaabiyeen ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia. Xafladaas oo looga gol lahaa taageerada natiijooyinkii ka soo baxay shirkii dibu u heshiisiinta ee lagu dhisay baarlamaanka, gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxwaynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay degmada Carta ee dalka Jabuuti.
Xafladaas oo laga soo jeediyay bayaan ku saabsan talo jeedin kaas oo loo diray Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Md. Dr. Cabdulqasim Salaad Xasan iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Md. Dr. Cabdalla Deeroow Isaaq.
Xafladaas oo ay ka soo qaybgaleen ardayda jaamacadaha kala duwan ee wadankan Malaysia sida: University Putra Malaysia, International Islamic University, University Technology Malaysia, Malaysian National University, University Malaya iyo oo ahay halkii lagu qabtay xafladda iyo weliba jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Malaysia oo aan u kala harin ka qaybgalka xafladaas.
Waxaa xafladda furitaankeedii aayadaha Quraanka ka akhiriyay Sheekh Musse Maxamud Axmed. Waxaa ereyo soo dhowayn ah iyo sharaxaad ka bixiyay shirkii dib u heshiisiinta Mr. Ibraahim Sheekh Abdulqaadir. Kadibna waxaa xafladda si rasmi ah u furay gudoomiye ku xigeenka ururka ardaya Soomaaliyeed ee Malaysia Mr. Yusuf Ismaaciil Bulale.
Kadibna waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyay Inj. Axmed Calasow oo ka jeediyay qudbad dheer isaga oo ka soo bilaabay halgankii loo soo maray xuriyadda, dhibaatooyinkii wadanka ka dhacay, sida ay nabadu lagama maarmaan u tahay iyo waxyaabaha loo baahan yahay. Intaa kadib waxaa ka hadlay rag fara badan oo ay ka mid yihiin. Dr. Nuur Cabdi, Dr. Musse Maxamud Axmed, Dr. Qaasim Xirsi Faarax.
Gabagabadii shirka waxaa bayaankii ka akhriayay Mr. Cabdullahi Faarax. Dhamaan ka qaybgalayaasha iyo ragii meesha ka hadlay waxay u mahad celiyeen Madaxwaynaha Jabuuti Md. Ismaaciil Cumar Geele, dowlada Jabuuti iyo dhamaan shacabka reer jabuuti, taageeradii wayneyd oo aan loo kala harin oo ay ka geysteen isu keenitaanka iyo ku dhiirigelintii inay cuqaashii halkaa isugu tagtay ay nabad u soo hooyaan dalkeena hooyo.
Waxaa sidoo kale halkaa mahad looga jeediyay dhamaan odayaasha dhaqanka ee Soomaalida, culmumaa’udiinka, mutacalimiinta, haweenka iyo ururada bulshada oo suurtogal ka dhigay inuu shirkaasi guul la taaban karo gaaro. Ugu danbayntiina waxay dowlada iyo baarlamaanka la soo doortay inay gutaan waajibaatka balaaran ee dhabarka u saran si daacadnimo, wadanimo iyo islaanimoba ah.
Waxayna ku booriyeen dhamaan ummada Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaanba wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba inay garab istaagaan ayna la shaqeeyaan ayna taageero hiil iyo hooba ahna ay ka geystaan sidii wadanka dib loogu dhisi lahaa.
Waxay sidoo kale baaq u soo jeediyeen raga ka soo horjeeda natiijooyinkii ka soobaxay shirkaas isaga ah inay ka waantoobaan damaca gaarka ah oo ay walaalohooda dhibaataysan wax la qaybsadaan ileen soomaalidu kuligeed wada talin maysee maadaama ay waqtigoodii ka faa’idaysan waayeen xiliyadii tegay.
Bayaanka oo faahfaasana dib ayaa idiinkaga soo diri doonaa. Waxaan halkan ku soo lifaaqnay sawiro laga qaaday dhacdooyinka xaflada oo ay ka qaybgelayaan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha xaflada.
Xafladaas waxaa soo qabanqaabiyay rag ay ka mid ahaayeen:
Mr. Cabdullah Faarax [MSc Candidate]
Mr. Cadulaahi Cali Maxamed- Xoogsade [MSc Candidate]
Mr. Cali Jimcale Cali [MSc]
Mr. Cabdiraxamaan Cabdishukuur [MA Candidate]
Mr. Saciid Cabdulahi Deni [MA Candidate]
Mr. Ibrahim Sheekh Abdulqaadir- Shidane [Ph.D Candidate]
Mr. Musse Qabobe Xasan [Ph.D Candidate]